Rafitra fanarenana solika |
MAMPISORONY NA MANAFOTANA NY RANO-TRANO DIA ANY AN-TRANO NA LAGOON IZAY ATAO TETIKO IZAO REHEFA MBOLA NO ATAO NY FAHAIZANA REHETRA? NY FANDROSOANANA NY OGIANA ANY NY ZAVAZY NY ZANY
Ny vahaolana dia ny PHORS 10 izay mahatody ny menaka tsara amin'ny sludge avelao milentika mofomamy ary rano.
PHORS 10 Unit miaraka amin'ny Decanter mijoro
Mitsipaka miaraka amina mofomamy / solosaina eo ambany
PHORS 10 miaraka amina tanky misy rano sy rano
Matetika amin'ny fanaingoana tranokala an'ny rafitry ny PHORS 10
Drafitra fika 10
PRO-LINE HYDRALINK TANKSWEEPS na SAHALA TSY MISY AZONY VOLANA
AZONAO MITADY NY FOTOTRA 10 ORA ARAKA NY FIKAMBANANA ORA
Miovaova ny habetsaky ny fanodinana araka ny kalitao fidirana sy ny kalitao hivoaka fa amin'ny ankapobeny 10m3 (13 cubic yard isaky ny ora) dia fidinana mahazatra manome valiny tsara kalitao
Ny menaka averina indray dia misy BS&W 2% na latsaka ary ny Sediment na solida sisa tavela aorian'ny fikarakarana dia hahitana 100ppm na latsaka kelin'izay mety ho hydrocarbons leach.
Ny singa PROLINE HYDRALINK PHORS 10 azo ampiasaina ho an'ny fitsaboana maloto dia namboarina manokana sy namboarina ho rafitra, mavesatra ny adidy, fanamboarana vita amin'ny vy nohamafisina manodidina ny 40 'ISO hi-cube boaty fitoerany. Ny singa dia mifamatotra amin'ny hidin-trano mahazatra ary mitondra plastika CSC ho an'ny fitaterana mora. Ny singa centrifuge dia omena miaraka amina tanjony manokana hananganana rindrambaiko ho an'ny fandidiana sy fikojakojana azo antoka.
Ny motera elektrika rehetra sy ny tontonana fanaraha-maso ny rafitra dia voatanisa EExd ho an'ny fampiasana fanadiovana Zone 1.
Ny unit PHORS 10 dia ahitana:
Mihamafana ny rafi-pandidiana mafana miaraka amin'ny lozisialy mahery, agitatoran'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny mivezivezy mandaitra sy ny fampiatoana indray ny solosaina ao anaty lefotra. Ny tanky mialoha ny fitsaboana dia manana mari-pamantarana ivelany ivelany sy fanairana avo lenta.
Agitator fiara mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny mivezivezy mivezivezy sy ny fampiatoana indray ny solika amin'ny sludge. Ny tanky mialoha ny fitsaboana dia manana mari-pamantarana ivelany ivelany sy fanairana avo lenta
Adidy mavesatra, variana hafainganam-pandeha herinaratra fiompiana Centrifuge Feed Pumps. Paompy Main miampy fantsom-peo mahery vaika ary mitete amin'ny fantsom-pifandraisana mba hiasa maharitra.
Rafitra fanoratana simika ho an'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fitsaboana ireo akora maloto solika maloto isan-karazany. Ny rafitra dia misy ny fampifangaroana roa metatra kambana sy fitazonana fiara mifono vy misy mpamporisika mpamily herinaratra sy paompy doka miovaova.
Centrifuge fehezanteny roa vita, tanjona hanesorana ireo solosaina amin'ny fantsom-panafody efa nomanina mialoha ary hamerina ny menaka kalitao tsara mifangaro amin'ny fametrahana mivantana miverina amin'ny trano fitehirizana ny fanadiovana.
Ny rafitra Centrifuge dia misy fanaraha-maso feno sy ny rafitra fanairana ao anaty rafitra control panel
Ny Centrifuge dia natsangana vita tamin'ny menaka ary sitrana chutes amin'ny menaka.
Ny rafi-panohanana sentrifuge namboarina natao ho an'ny tranobe haingana sy tsotra ary ahafahana miditra amin'ny toerana azo antoka manodidina ny centrifuge ho an'ny fikojakojana mahazatra.
Kitapo herinaratra VISCOTHERM entin'ny herinaratra ho an'ny familiana sy fanaraha-maso centrifuge. Fitaovana tariby mankany amin'ny tontonana fanaraha-maso centrifuge ho an'ny fandidiana azo antoka sy tsotra.
Tankaiza mitazona solika (3.5m3) miaraka amina mari-pamantarana ivelany ivelany sy fanairana avo lenta.
Adidy mavesatra, fihenam-pandeha herinaratra miovaova hevitra Sludge Feed Pump ho an'ny sisan-kanina amin'ny PHORS 10 Unit
Adidy mavesatra, haingam-pandeha elektrika haingam-pandeha Recovered Pump Pump hamindra ny menaka haverina ao anaty tanky fitehirizana mifanaka aminy na hiverina mivantana ao amin'ny rafitra fanadiovana.
Ny fitaovana rehetra dia tariby ao anaty tontonana fanaraha-maso lehibe ho an'ny fandidiana azo antoka sy tsotra. Ny paompy fahana rehetra dia mijanona / manomboka mifangaro amin'ny fanairana avo lenta / ambany.
Rafitra natao ho an'ny asa any an-toerana any amin'ny toerana lavitra ary manana mora ampiasaina avokoa ireo entana fikojakojana.
Ny refy sy ny lanjany:
13.411m lava x 2.438m sakany x 2.895m avo
Milanja: maina: 13,000 Kg
Miasa: 33,000 XNUMX Kg
Fiama: 4,500 Kg / Ora eo amin'ny 10 bar max
Herinaratra: 415 V 3 dingana 300 KVA
Rano: famatsian-drano hydrant mahazatra amin'ny rafitra doka simika ary manadio
Ny fatran'ny menaka miora amin'ny lasantsy dia 10-25³ / ora arakaraka ny kalitao
Ny menaka haverina dia misy BS&W 2% na latsaka ary ny Sediment na ny solida sisa tavela aorian'ny fikarakarana dia hanana 100ppm na latsaka hidrokarôma azo avela